MAREEGTA ARRIMAHA CAAFIMAADKA » 2011 » augusti
Asalaamu calaykum! Bahda Mareegta caafimaadka waxa ay dhammaan akhristayaasha qiimaha iyo qaayaha ka mudan, waxa aanu idin leenahay Ciid wanaagsan ku ciida dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Ciidan ciideeda klae Ilaahay ha inagu gaadhsiiyo caafimaad qab aamiin inshaanlaa. Daawo video-ga Ciidul-Fitr Bahda mareegta Caafimaadka www.caafimaadka.com E-mayl: editor@caafimaadka.com E-mayl: Caafimaadka@gmail.com
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Manager-kii shirkadda Apple oo cancer ku dhacay, Steve Jobs
Steve Jobs, waaka dharka madow gashan Steve Jobs, oo ah managerk-ka ama mulkiilaha shirkadda soo saarta kumbiyuuutarada iyo telefoonka , Iphone, Ipad, Ipod, iyo qaar kale oo uu ku dhacay cudurka dilaaga ah ee Cancer (Kansarka). Maalintii arbacadii ayey ahayd markii warbaahinta dunnida oo dhan la baahiyey warka ah, in Steve Jobs, ka degay xlikii […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Halkan ka daawo shirkii arrimaha caafimaadka ee ka dhacay gobolka Togdheer ee magaalada Burco
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Mahad celin ”mawduuciii riixda afka qadhmuun”
Nagiib walaal waan ku salaamay marka hore , salaanta muslimka (ASCWRB)Intaa ka bacbi walaal waxaan kaaga mahad celinayaa sida aad isugu taxalujisay inaad i caawiso aniga iyo inta ila midka ah ee dhibkan ka cabanaya , walaal ilaahay ha kaa abaal mariyo adiga iyo bahda caafimaadka oo iyakuna intaa ku howlan si ay uga haqab […]
· admin	· 3 Comments Posted in: Maqaalo	Xaalada guud ee cusbitaalka Hargeysa qaybtii 2 aad
Xaalada guud ee cusbitaalka Hargeysa Waxa aynu ka soo hadalnay qaybtii hore xaalda guude ee cusbitaalka Hargeysa. Waxa aynu maraynay markii dagaaladu ka dhaceen Hargeysa sannadku markuu ahaa 1988, bishii Maj 31-keedii. Sidii aynu horeba u soo sheegnay waxa jiray dad bukaana oo dagaaladii ugu dhaceen dhakhtarka Hargeysa. Dhakhtarka oo markaa ku yaalay halka uu […]
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Dhakhaatiirta dalka iyo kuwa caalamkuba waxa ay dadka uga digaan fadhiga faraha badan
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Soonka Ramadaan-tu Waxa Uu Hoos U Dajiyaa Macaanka Iyo Dhiig-karka, Waxaanu Qofku Dareemaa Caafimaad Badan Iyo Xasilooni Aad U Saraysa”
Dr. C/Nasir Maxamed Cabdi Hargeysa, August 8, 2011 (Haatuf) – Dad badan ayaa ka cawda xanuunadda ku dhaca caloosha ama uurku-jirta. Kuwaas oo marka ay tagaan goobaha caafimaadka Dhakhaatiirta usoo gudbiya cabashadooda ku saabsan xanuunada ay ka cabanayaan sida Casiraad, Calool Olol, Gaastari IWM.
· admin	· No Comments Posted in: Maqaalo	Qaybtii 2aad ee taxanaha ahayd ee cudurka Autism-ka
Waxa inoo sii socodta qaybtii 2aad ee taxanaha ahayd ee ka hadlaysay, cudurka Autism-ka sidaa iyo akhris wanaagsan! Fitamiin D Fitamiinkan wuxuu u jiraa qaabab kala duwan waxaana ugu muhiimsan fitamiin D2 (Ergocalciferol) iyo D3 ( Cholecalciferol), oo laga kala helo dhirta iyo xayawaanka. Fitamiin waxaa la yiraahdaa nafaqooyin (organic nuitrients) inta badan uusan jirku […]
· admin	· One Comment Posted in: Maqaalo	Categories